British Slang တွေ American Slang တွေ သင်တန်းတွေသွားတိုင်း စာအုပ်တွေဖတ်တိုင်း မြင်ရတွေ့ရတာ ရိုးနေလောက်ပြီဆိုတော့ Yangon Slang လေးတွေ ရွေးထားတယ်နော်။
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ တော်တော်လေးအသုံးများတဲ့ စကား (slang) လေးတွေကို အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပါယ်လေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
¨ မိုက်တယ် - It’s good
¨ လန်ထွက်တယ် - It’s so cool!
¨ ဒီုးပီ လစ်မယ် - Let’s go!
¨ ရေရေလည်လည်လန်းတယ် - To describeagirl who is very stylish and fashionable
¨ ပိုးစိုးပက်စက် ဂွမ်းတယ် - To describe people who haveabad fashion sense
¨ ရွာပတ်တယ် တိုင်ပတ်တယ် - To describe someone who goes around and around in
circles and does not get anything done.
¨ အကိတ်ကြီး - Tellingawoman she hasanice body (especially if it is
¨ အဆင်လေး - Tellingagirl or boy that they are stylish/beautiful
¨ အမွှေစိန် - To tellaperson they are very naughty and
¨ မောင်းတယ် - To describeaboss who pushes his staffalot
တက်ချင်တဲ့ဘာသာရပ် စိတ်ဝင်စားတဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် sayar.com.mm မှာ ရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
British Slang တှေ American Slang တှေ သငျတနျးတှသှေားတိုငျး စာအုပျတှဖေတျတိုငျး မွငျရတှရေ့တာ ရိုးနလေောကျပွီဆိုတော့ Yangon Slang လေးတှေ ရှေးထားတယျနျော။
ကြှနျတျောတို့ ရနျကုနျမှာ သူငယျခငျြးတှကွေားထဲမှာ တျောတျောလေးအသုံးမြားတဲ့ စကား (slang) လေးတှကေို အင်ျဂလိပျလို အဓိပ်ပါယျလေးတှနေဲ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
• မိုကျတယျ - It’s good
• လနျထှကျတယျ - It’s so cool!
• ဒီုးပီ လဈမယျ - Let’s go!
• ရရေလေညျလညျလနျးတယျ - To describeagirl who is very stylish and fashionable
• ပိုးစိုးပကျစကျ ဂှမျးတယျ - To describe people who haveabad fashion sense
• ရှာပတျတယျ တိုငျပတျတယျ - To describe someone who goes around and around in
• အကိတျကွီး - Tellingawoman she hasanice body (especially if it is
• အဆငျလေး - Tellingagirl or boy that they are stylish/beautiful
• အမှစေိနျ - To tellaperson they are very naughty and
• မောငျးတယျ - To describeaboss who pushes his staffalot
တကျခငျြတဲ့ဘာသာရပျ စိတျဝငျစားတဲ့သငျတနျးတှရှေိတယျဆိုရငျ sayar.com.mm မှာ ရှိတဲ့ ဆရာ ဆရာမတှနေဲ့ ဆကျသှယျပွီး ဆှေးနှေးနိုငျပါတယျ။
Read 1521 times Last modified on Wednesday, 11 October 2017 15:23
အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား တိုးတက်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းလေးတွေဖန်တီးပြီး ကစားကြည့်ရအောင်
ဆရာ ဆရာမများအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် တက်ရောက်ရမည့် (TEA) ပညာတော်သင်ဆု